Hevitra 5 tsara indrindra ho an'ny Wordpress an'ny 2015 | Famoronana an-tserasera
Tema WordPress 5 tsara indrindra amin'ny 2015
Fran Marin | | lohahevitra, Wordpress
Mba hahafahan'ny lohahevitra WordPress hahomby sy hifanaraka amin'ny tontolon'ny habaka web ankehitriny, dia tsy maintsy misy toetra na toetra maromaro. Voalohany indrindra, tsy maintsy misy zavatra mahafinaritra izay mahasarika antsika. Izany dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fitambarana chromatic sy typographic ary ny sary sy ny singa rehetra mandrafitra ny endrika. Etsy ankilany fa ny interface interface dia mamaly dia efa adidy satria mila mahafeno ny fahafaham-po amin'ny fitaky ny mpampiasa amin'ny fomba rehetra sy ny sehatra rehetra izahay. Rehefa manapa-kevitra ny handray lohahevitra iray isika dia tsy maintsy manandrana manao izany ho lohahevitra noforonina na navoaka tamin'ny taona lasa satria tsy maintsy misy ny rafitra manavao sy mahomby indrindra (koa amin'ny lafiny SEO).
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, dia namolavola safidin'ireo lohahevitra dimy manintona indrindra amin'ity taona ity. Tsy misy isalasalana, ny fomba tsara hanaovana veloma azy dia amin'ny alàlan'ny fanombanana sy fandinihana ireo tolo-kevitra tsara indrindra efa vita sy fanangonana ireo lohahevitra WordPress 5 tsara indrindra tamin'ny 2015:
1 Ronneby - Loha Hevitra WordPress mahomby
2 Oshine - Lohahevitra WordPress Creative multi-tanjona
3 Theme Directory Directory - Listify
4 Mpivarotra - Lohahevitra WordPress mamaly
5 Rhythm | Lohahevitra WordPress maro lohahevitra mahaliana
Ronneby - Loha Hevitra WordPress mahomby
Manana maodely maherin'ny 40 ho an'ny pejy portfolio ary 13 ho an'ny bilaogy. Ity modely ity dia miavaka amin'ny fananana endrika minimalist izay manome famaranana madio sy kanto. Ny fahamendrehana ary miaraka amin'izay koa ny fahatsapana ny rafitra dia mahatonga azy io ho tonga lafatra mba hampidirina sary kanto sy manome sosokevitra. Ronneby dia mifanaraka amin'ny Internet Explorer (kinova 10 sy 11), Firefox, Safari, Opera ary Chrome mpizaha. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny WPMLO, WooCommerce na dia avy amin'ny kinova 2.0 aza ary miaraka amin'ny Visual Composer 4.7.4. Ny Layout-ny dia mamaly ka manome antoka ny fidirana amin'ny karazana fitaovana na inona na inona haben'ny efijery izay milalao azy. Ny firafiny dia manohana tsanganana 4 ary misy rakitra manazava izay ahafahanao mianatra manamboatra ny lohahevitra tsikelikely ary manamboatra azy io mifanaraka amin'ny filan'ny tetikasanao.
Oshine - Lohahevitra WordPress Creative multi-tanjona
Oshine dia modely marobe famolavolana izay manana modely tsy manam-paharoa 18 (izay ahitanao ny demo avy amin'ny tranokala ofisialiny) izay hanampy anay hahita ny vahaolana mety indrindra. Ho an'ny maro, io no modely kintana tamin'ny taona raha mikasika ny tetikasan'ny bilaogy. Ny iray amin'ireo tanjany dia ny fananany rafitra mifangaro miaraka amina feo tena izy (amin'ny endrika fampianarana) amin'ny alàlan'ny plugin Sidekick, izay manamora ny fampiasan'ny mpampiasa sy ny fanaovany azy. Ity lohahevitra ity dia mifanaraka amin'ny Internet Explorer manomboka amin'ny kinova 9 mandroso ary koa Firefox, Safari, Opera ary Chrome. Izy io koa dia manohana ny kinova Woocomerce 2.4 ary toy ny ankamaroan'ny lohahevitra dia manana layout na interface tsara izy io hiantohana ny famokarana mahatoky azy amin'ny fitaovana na fitaovana rehetra.
Theme Directory Directory - Listify
Ity lohahevitra ity dia novolavolaina mba hiresahana am-pahombiazana amin'ny lafiny roa: ny fampiasa sy ny hatsarana. Ny marina dia rehefa manandrana miditra amin'ny volavolan-tranonkala mifantoka amin'ny tetikasan'ny lahatahiry isika dia mahita tsy fahampiana amin'ny lafiny hatsarana. Ny lahatahiry mahasoa indrindra dia manome fampiasa maro be azo idirana nefa na izany aza hadinoina ilay singa kanto. Amin'ny alàlan'ny Listify dia azonao atao ny miditra amin'ireo orinasa, magazay, toerana ary serivisy amin'ny alàlan'ny rafitra geolocation saingy miaraka amin'ny toerana tsirairay misy sary tsara tarehy ary koa ny menus sy bokotra minimalista sy mitandrina. Ity lohahevitra ity dia mifanaraka amin'ny Internet Explorer (avy amin'ny kinova 10), Firefox, Safari, Opera, Chrome ary koa amin'ny Woocomerce (avy amin'ny kinova 2.2.), Gravity Forms ary Edge. Layout mamaly mifanaraka amin'ny karazana sehatra sy fitaovana rehetra.
Mpivarotra - Lohahevitra WordPress mamaly
Ity lohahevitra ity dia natao ho an'ny tetik'asa e-varotra ary manome safidy tena mandroso ary koa interface tsara namboarina mba hahatratrarana ny farany tsara indrindra sy hampifanaraka izany amin'ny fahitanay. Ny asany dia misy ny fahafaha-mitantana fitehirizana, famolavolana sy fanamboarana katalaogy sy ny safidiny fampisehoana na ny mety fanasokajiana ireo vokatra sy serivisy. Ny maodelinao dia hanolotra anay rafitra iray izay hanampy anay hanangona fotoana be dia be ary hahazoana valiny matihanina. Ho fanampin'izany, ny fonosana dia misy fanavaozana maharitra sy antontan-taratasy lava. Mpivarotra dia mifanaraka amin'ny Internet Explorer (avy amin'ny kinova 9), Firefox, Safari, Chrome na Edge Browser. Izy io koa dia mazava ho azy fa mifanaraka amin'ny plugin Woocomerce ho an'ny WP, Gravity Forms, Visual komposer ary Foundation 5. Ny interface-ny dia mamaly ihany koa mba hahafahan'ny magazanao miditra amin'ny fitaovana rehetra.
Rhythm | Lohahevitra WordPress maro lohahevitra mahaliana
Rythm dia vatosoa izay misy maodely maherin'ny 45 ho an'ny masoivoho, portfolio, sary, bilaogy ary fivarotana ankoatra ny hafa. Safidy tena mahaliana izy io satria lohahevitra multipage izy io ary misy ny safidinao amin'ny takelaka feno, paralaks ary slider. Izy io koa dia manana rafitra SEO manara-penitra, izany no antony nanolorana azy ho pejy Seo Experts malaza. Nahazo loka ihany koa tao amin'ny Awwwards ary izy no mpivarotra indrindra tamin'ny fahavaratra lasa teo. Ny lohahevitray dia mifanaraka amin'ny Internet Explorer (manomboka amin'ny andiany 9 mandroso), Firefox, Safari, Opera ary Chrome navigateur. Ankoatr'izay, izy io koa dia hiaraka amin'ny WPML, Woocommerce manomboka amin'ny kinova 2.0 mandroso, Gravity Forms (kinova 1.7 mandroso), Visual Composer ary Bootstrap. Ny interface dia mamaly izay mahatonga azy ho tonga lafatra amin'ny orinasa, ny karazana magazine sy magazine, masoivoho, trano fisakafoanana ary portfolio.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » lohahevitra » Tema WordPress 5 tsara indrindra amin'ny 2015
Webbing Web Design Barcelona dia hoy izy:
Wow, modely tena tsara sy vaovao ary manintona ho an'ny famolavolana tranonkala tsara!
Mamaly ny Webbing Web Design Barcelona
The Memento Mori avy amin'i Etoille Bulle